Aga m echeta onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị m, Maazị Dilk. Ewezuga nyocha ọ na-eme onwe ya mgbe ọ pụtara na ọ chọrọ ịkọcha (? Ọ dị mma… BUGS!?) Ojiji a na-eme ugboro ugboro jisiri ike mee ka amamihe dị na ụbụrụ m gbakwunye. N'etiti ndị ọkacha mmasị ya:
Ọbụghị naanị na ịme nzuzu-nzuzu na-eme ka ụdị agwa gị belata, ọ bụkwa ego na-efufu. Enweghị ezigbo ajụjụ nke ihe e mere ebe – na oge nọrọ na-eme ya – gị online mgbalị ndị a zuru ezu igbu oge na ego.
Shoplọ ahịa dijitalụ ọ bụla bara uru nnu ha ga-eme ka ha nwee usoro ha. Ọ bụrụ na ha emeghị, jụọ ha banyere ya. Ọ bụrụ na ọ dị ha mma ma ọ bụ na ha enweghị kpamkpam, gbaa ọsọ. Ga - ahụ mmefu ego ị na - ere n’ ntanetị na - belata ma n’enweghi ihe ọ bụla ị ga - egosiputa ya ma e wezụga nkwụnye ego kagburu.
Iji mezuo nke ahụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nọ n'ọnọdụ ịga naanị ya na oghere dijitalụ, ana m akwado ka ị lelee CMO's Guide to the Social Landscape. Ọ bụ ihu ọma a na-elekọta mmadụ media cheat mpempe akwụkwọ na uru na adịghị ike nke n'elu nyiwe na ọrụ. Nyocha a mere site na Ntọala 97th, na ọ bụ ezigbo ụzọ mpempe akwụkwọ nduzi.
Enwere ọtụtụ ọrụ ntanetị mmekọrịta na ebe ahụ; Ọ dịghị otu onye bụ ihe ziri ezi, dịka ịnwa iji ha niile eme ihe adịghị mma. Enweghị onye azịza, ọ dịghị otu usoro mmekọrịta mmekọrịta na-arụ ọrụ maka ndị ahịa ọ bụla. Site n'iji ezi uche na-eme atụmatụ na-aba uru, ị na-eji oge na ego gị eme ihe n'ụzọ kasị mma.